Mamota nechokunze inoratidzwa simba akawedzera mutsinga dziri nekunobuda netsvina yokutanga. Dai kuumba nodes, ari mutsinga uye rwakatambanudzwa pahupamhi uye urefu. The chirwere mberi.
Kwakajairika pfungwa pamusoro chirwere, sezvo chinhu chinonyadzisa, hachisi chokwadi. The chikonzero chingava nokusarovedza muviri, doro, inonetesa muviri. Zviratidzo zvinosanganisira marwadzo, unopfuta, kuvaviwa, vatorwa muviri manyawi, uye zvichida zviduku ropa panguva defecation. Tichaedza kufunga chii kubata Mamota.
Mamota kunoitika kwete kamwe, kwete pakarepo. Inokudziridza zvishoma nezvishoma. Kuti kurapa nayo, zvinokosha kuti chirwere mune nenguva nenzira. Nokuti nechirwere zvakafanira kureva nyanzvi. Wakaitwa kushandisa digitaalinen kuongorora kushandisa anoscopy (kushandisa mudziyo kuzoongorora mukati mugaranhoko pa 12-14 masendimita) kana kushandisa sigmoidoscopy (chakavimbika kupfuura uye yakarurama nzira nokuda zvachose zvokuongorora rinoitwa pachishandiswa sigmoidoscopy uye chinopinda mukati mugaranhoko 20 -35 cm). Kune dzimwe nzira nechirwere, akadai barium enema, colonoscopy, uye vamwe.
Kwete kare, makore gumi kana gumi nemashanu apfuura, nzira huru kurapwa kwaiva kuitisa oparesheni. Munguva yedu, panewo zvakawanda zvisiri invasive nzira. Vane nyarara, vane kuderedza ngozi yematambudziko, anogona kuzadzisa kupora. Zvisinei, zvinokosha kuti tiyeuke kuti kushandisa nzira dzakadaro zvakanaka tanga pane kurapa Mamota kana chirwere inofambidzana kuregeredzwa. Vanogara nzira dzakadaro.
Mumwe nzira akawanda zvakadaro sclerotherapy. It rinoshandisirwa mukutanga chaizvo nzendo chirwere. In rinokosha tsinga jekiseni fuma pasi chiito icho zvishoma nezvishoma shoma venous nodes. The yose Kurapa rinovapo anopfuura kaviri.
Kana michini photocoagulation kurapwa kushanda runowanikwa coagulation (pakugwamba) mutsinga chaiyo mudziyo dzichifura Mamota zvichiita kuti ropa kuyerera ipfupi uye zvakamisa hurongwa vari wakaderedzwa zvishoma nezvishoma kusvika hwandaiva ezvinhu.
In tikashandisa proximal ligation rinoitwa yokutanga ano hemorrhoidal tsinga nzvimbo kutsunga Zvadaro akaita ligation yavo (ligation), zvichiguma kuderera pakati venous nodes. The oparesheni zvinoitwa pasi omunzvimbo yokutindivadza uye rinovapo asisiri pane hafu yeawa.
Pane nzira dzakadai ligation latex zvindori. Special midziyo iri vaipa kune mukati hemorrhoid, kuti Vacuum wavhomorwa kushandisa midziyo uye compressed latex mhete. Kwapera nguva (anenge manomwe gumi mazuva), akafa, uye nekurambwa muviri. oparesheni iyi inodzokororwa kubvisa zvose nodes. Kazhinji zvavo hapana kupfuura vatatu.
Vanotaurawo pano kuvhiya kurapwa - nzira mikuru kunorapwa akazotevera nzendo chirwere. Muchiitiko chino, surgically akabvisa zvose zvemukati uye kwokunze zvinoriumba. Complete ronda kuporeswa anotora nzvimbo kwenguva isina anopfuura makumi maviri mazuva.
Zvakakosha kuziva kuti pane kuchinja kurapa. Pano zvinoita kuti kushandisa zvinodhaka makenduru, mishonga mushonga, inokosha masaja. Shandisa nzira ava kutanga nzendo chirwere kunopfuura mushonga Mamota surgically.
Ngationei kuti kurapa Mamota pamba. Kune vashoma dzakakurumbira Recipes.
Anogona kushandiswa mune tabhu nemvura inodziya uye kurwisa kurwadziwa. Izvi nyore chishandiso kunogona kuderedza marwadzo munguva rikwanise chirwere.
Unogona tsvedzesa kwazvo makwapa pamwe Vaseline, akadhindwa ari donje shinda.
Tora yetea mbeu psyllium pakati girazi remvura mangwanani ose kwevhiki rimwe. In vhiki rechipiri tora chikamu ichi mangwanani uye nokuda kuzodya. In vhiki rechitatu, wedzera mamwe uye nokuda kuzodya. Uye kuti zvachose tsika mune ramangwana. Sezvataona, kubata Mamota pamba zvinogoneka mukutanga nzendo chirwere.
Vamwe vanhu vanofunga kuti Mamota havasi ngozi, hakuna migumisiro. Asi ichi handizvo. Somugumisiro chirwere mumagaro kutsemuka uku ingangoumbwa pamusoro nguva inogona kuderera kugona kuramba faeces uye magasi, rectal fistula inogona kuumbwa. Saka regai sevasingaoni kuti dambudziko. Zvakakosha kuziva chirwere munguva uye edza kuita zvose zvinodiwa kuti apore. Zvinokoshawo kudzivisa zvirwere prerequisites, sezvo pane kurapa Mamota zvakanaka kwete kumupa mukana kuitika.
Metabolic Acidosis: Zviratidzo neMarapirwo.
Inosimudzira nguva prothrombin zvokuita uye sei kudzosa kufirwa. Chii "prothrombin nguva"
Prion zvirwere: zvinokonzera, zviratidzo, nechirwere, kurapwa
Hydrocele ari rusvava: zvokuita?
Bilirubin Total zvakawedzera. Zvinokonzera yakakwirira bilirubin muropa. Zvokudya pamwe zvakawedzera bilirubin
Trichomoniasis: zviratidzo, zvinokonzerwa, kuongorora chirwere uye kurapwa
Chivharo kubva Monomakh munhau uye modernity
Salting Sarimoni resipi pamba
Diego Luna: kupenya, nevakwegura, unhu tarenda uye kushingaira
Epaulettes Vachuchisi: insignia
Sei kusarudza analoginen "tsifran". Reviews
Mukanyiwa khachapuri: yokuwana ne pikicha
Ndiani anodzidza nezvepfungwa-mudzidzisi?
Evanhu pfupi kugerwa.
Model 3165 UAZ: unhu uye peculiarities
Nzira kugadzirira huku mapapiro. Muto nokuda huku mapapiro
BUNKER: chii uye chii rinoshandiswa?
Rinoreva "ampicillin". kunyoresa